ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုတွေ ဘယ်တေ...
21 มี.ค. 2563 - 02:33 น.
ချောင်းဆိုးတာက ကိုဗစ်-၁၉ ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာမကြာ လက်ဆေးဖို့၊ ချောင်းကို အုပ်ပြီး ဆိုးဖို့၊ မျက်နှာကို လက်နဲ့ မထိဖို့ လိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုတွေ ဘယ်တော့ ရပ်မယ်လို့ ပညာရှင်တွေ သုံးသပ်ထားလဲ